IHyaluronic Acid emzimbeni wakho
I-Hyaluronic Acid ngummangaliso wamanzi wemolekyuli enothando ehambisa inkqubo ngesakhono sayo sokufumana ukuya kuthi ga kwi-1000 ubunzima bayo emanzini. Izibonelelo ezifumaneke ngokuthatha okanye ukusebenzisa i-HA zahlukile kumntu ngamnye kwaye zinokufunyanwa kuwo wonke umzimba kubandakanya ulusu, amalungu ...
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate -— i-odolo ekhawulezayo ye-100kg
Enkosi kwisigqibo somthengi wethu kwi-0rder 100kg Ascorbyl Tetraisopalmitate ngexesha elifutshane. Ukusetyenziswa kwe-Ascorbyl Tetraisopalmitate: * * Ukhuseleko lomonakalo welanga * Ukulungiswa komonakalo welanga * * Antioxidant * * Ukuthambisa kunye ne-hyd ...
Isiqinisekiso esihlaziyiweyo 'somthengisi'
Ngomhla we-Meyi.20,2021, i-SGS iphinde yaphicotha inkampani yethu ukuqinisekisa ukuba umbutho wethu ungumntu othembekileyo kwimarike yehlabathi. Emva kokuba abaphicothi-zincwadi be-SGS bewenze ngokungqongqo nangokucophelela umsebenzi wabo, siyavuya ukwazisa ukuba ekugqibeleni siyifumene imvume ye-SGS kunye nesatifikethi esihlaziyiweyo soMthengisi oPhicothiweyo. Sizibandakanya ...
Igumbi lokubonisa elenziweyo lase China lihlaziyiwe
Singamalungu aboneleli be-Made-In-China ukusukela ngo-2016, kunye noMthengisi ophicothiweyo weSGS. Ukurhweba kwi-Intanethi, samkela ukuba undwendwele igumbi lethu lokubonisa ukujonga iimveliso zethu, izimvo zakho kunye ne ...
Ulwandiso lweMveliso eNtsha-Anhydrous Lanolin
Ukusukela ngo-2012, sinamava eminyaka emininzi kumdlalo we-Lanolin, okwangoku, sele simisele igama elihle kwintengiso.Ukubonelela ngeLanolin kuninzi lwamaqabane ethu ehlabathi, sithathe isigqibo sokwandisa imveliso yethu kunye Uluhlu lweLanolin njengenye yeemveliso zethu ezomeleleyo eziphambili ....
I-Kojic acid vs Hydroquinone kukhathalelo lolusu
I-acid ye-Kojic kunye nehydroquinone zizinto ezimbini ezithandwayo ezisetyenziselwa ukwenziwa isikhumba ngombala. Zisetyenziswa kwiimveliso ezininzi zokukhathalela ulusu kwaye zinceda ukunyanga i-hyperpigmentation, amabala amnyama, ukonakala kwelanga njl.njl. Banokuthintela ngamandla ...
Ukwenza mhlophe kunye namabala okususa umsebenzi weArbutin
IArbutin inokuthi ikhutshwe ngokwemvelo kwizityalo ezinje ngebherberry kwaye yenziwe ngendlela yeekhemikhali. I-Arbutin eyenziweyo ngoku yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwii-cosmetics. IArbutin inokunyakamisa ulusu olujongeka lukhanya kakhulu, ke iarbutin isetyenziselwa ukukhanyisa ulusu ...
Sodium Hyaluronate Intshayelelo
Umbono weKhemikhali kwiiHyaluronans https://www.yrchemspec.com/sodium-hyaluronate-product/ Usapho lwaseHyaluroan lwenziwe liqela elibanzi lobunzima beemolekyuli ezahlukeneyo, iyunithi ye-basilar yepolymer yi-disaccharide ye β (1,4) - I-glucuronic acid-β (1,3) -N-Acetalglucosamine.Yinxalenye yeglycosaminoglyc ...
Siyavuya ukwazisa iPolyquaternium-47 njengenye yeemveliso zethu ezintsha kumgca wemveliso yoluhlu lwePolyquaternium. IPolyquaternium-47 sisisombululo esinamanzi se-amphoteric terpolymer esine-acrylic acid, methacrylamidopropyl trimethyl ammonium chloride kunye ne-methyl acrylate. Iyahambelana ...
ngomphathi ku 21-02-19
Ngenxa yerokethi eyandayo kunye nokuqiniswa kokubonelela ngezinto zokwenza izinto 1,4-Butanediol ekrwada, kufuneka sibhengeza ukumisa ukwamkela naziphi na iiodolo ezintsha ngaphandle kwezaziso zangaphambili okanye iingxoxo zeemveliso ezichazwe ngezantsi. Nayiphi na ii-odolo ezintsha kufuneka kuthethwe ngazo ngamatyala kwaye kugqitywe. Nangona kunjalo, siya kwenza konke okusemandleni ethu ...
Ixesha libaleka! UMnyhadala wethu weNtwasahlobo uyeza. Siyanibulela zonke iintsapho zethu, oogxa bethu kunye nenkxaso yamaqabane kunye nentsebenziswano kulo nyaka uphelileyo, osincedileyo ukuba senze ngaphezulu kwe-160% inyuka ngo-2020. Nceda niyacetyiswa ukuba iholide yethu yoNyaka oMtsha waseTshayina icwangciselwe ukusukela ngoFebruwari 10. ~ Fe ...
Ukusetyenziswa kunye nezibonelelo zeKojic Acid
Yintoni i-Kojic Acid? I-acid ye-Kojic yi-godsend kuye nabani na olwa namabala amnyama kunye nolusu olumnyama. Sisithako esimangalisayo esikhoyo kwizithambiso ezikhanyisa ulusu kunye neeserum, kwaye ndiza kukuxelela ukuba kutheni. Yintoni iarhente ekhutshwe kwiintlobo ezahlukeneyo zomngundo, ngakumbi iintlobo ezahlukeneyo zeA ...